Toy izao no filahatry ny Andriana teto Imerina:
1575 - 1610, fotoana nanjakan-dRALAMBO
Tamin’ny fotoana nanjakan-dRalambo no nanasokajiana ny Andriana izay nilahatra toy izao :
1. ny Zanadralambo,
2. ny Andriantopokoindrindra,
3. ny Andriamboninolona,
4. ny Andriandranando,
1675 - 1710, fotoana nanjakan'ANDRIAMASINAVALONA
Tamin’ny fotoana nanjakan’Andriamasinavalona dia nalahany toy izao ny Andriana :
1. ny Zazamarolahy : taraky ny zanak’Andriamasinavalonaefatra miarahalahy nizany ny fanjakana : Andriantsimitoviaminandriana (tao Ambohimanga), Andrianjakanavalomandimby (tao Antananarivo Imerinatsimo), Andriantompoinimerina (tao Ambohidratrimo), Andrianavalonimerina (tao Ambohitrabiby);
2. ny Andriamasinavalona : taraky ny zanaka valon’Andriamasinavalona izay tsy nanjaka ;
3. ny Andriantopokoindrindra ;
4. ny Andriamboninolona ;
5. ny Andriandranando ;
6. ny Zanadralambo.
Tambonin'ireo dia nisy ny Zanakandriana izay nisy ny zafikelin'Andriamasinavalona.
Ny Zanakandiana sy ny Zazamarolahy irery ihany no nahazo nitondra ny haingon’ny Andriana (habaeo amin’ny tongotra, vatosoaeo amin’ny loha, lambamena, elo mena…)
Ny Zanakandriana sy ny Zazamarolahy ary ny Andriamasinavalona irery ihany no mahazo majaka sy milevina amin’ny fasana misy tranomanara.
1675 - 1710, fotoana nanjakan'ANDRIANAMPOINIMERINA sy taty aoriana
Tamin’ny nanjak’Andrianampoinimerina dia nisy fotoana nanasiana sokajin’Andriana iray ambonin’ny rehetra avy amin’ny Zanakandriana na Zazamarolahy, dia ny Izimirahalahiavy sy Izimrahavaviavy na Izimianadahiavy, izay taranaky ny vady roambin’ny folony sy taranaky ny iraitampo taminy. Tamin’ireo no tokony hifidianana ho mpanjaka handimby an’Andrianampoinimerina. Nisy fotoana nampitombo be loatra ny Izimianadahiavy ary nifamono niady ny fandovana fanjakana. Nihena ary foana mihitsy aza ny Izimianadahiavy taty aoriana noho ny ady fandovana fanjakana. Niverina na naverina tamin’ny sokajy Zanakandriana na Zazamarolahy niaviany ny Izimianadahiavy : toy ny taranaka mivantan’Andrianampoinimerina rehefa niamboho ny mpanjaka.
Ary tamin’izany dia ny Zazamarolahy sy ny Zanakandriana no nifamory ary nandany fa ny zana-jokiny tera-behivavy no tokony hanjaka. Ny tera-behivavy dia zanaky andriambavy Zazamarolahy na Zanakandiana ka ny rainy dia tsy maintsy Zazamarolahy. Ny nahatonga izany dia satria ny vehivavy no noheverina fa nahatahiry ny tena maha-andriana feno fa ny lehilahy kosa dia tsy mba toy izany fa afaka mandehandeha any ambadika any.
Raha misy vehivavy Zazamarolahy manambady Andriamasinavalona dia manaraka an-drainy ny zanany, raha tsy hoe hafa noho izany no didian’ny mpanjaka.
Ary dia notanana toy izao ny filahatry ny Andriana taty aoriana :
1. ny Zanakandriana,
2. ny Zazamarolahy,
3. ny Andriamasinavalona,
4. ny Andriantopokoindrindra,
5. ny Andriamboninolona,
6. ny Andriandranando,
7. ny Zanadralambo.